musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Chii chitsva muBahamas munaGunyana
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Tizira kumvura inodzikama yeThe Bahamas kuti uongorore kuchengetedzwa kwekupedzisira kwechitsuwa uye kushamisika nezvishamiso zvepanyama pasi pechiso. Nenzendo nyowani dzekutsvaga kwekushanya, zvigadzirwa zvakagadziridzwa uye madhiri anopisa, vafambi vari kutsvaga kubhuka yavo inotevera zororo vari mune yechiitiko chisingakanganwike.
Rondedzero yezviitiko zvinonakidza muBahamas yakaziviswa, uye zvinoshamisa.
Fungidzira uripo apo Tiger Woods anodzokera kuAlbany yeiyo 2021 Hero World Dambudziko.
Kana kugashira vabati vehove muState-of-the-Art Superyacht Shamwari Marine Opens in Walker's Cay. Asi mira, pane zvakawanda…
UNEXSO Inosheedzera Nyowani Girazi Pasi Yechikepe Chiitiko kuShark Junction - Vafambi vane hushingi uye vanotsvaga mafaro vanogona ikozvino kunakidzwa nechitsva chechikepe kubva kuPort Lucaya, iyo Girazi repazasi Chikepe kuShark Junction Tour.
Tiger Woods Inodzokera kuAlbany yeiyo 2021 Hero World Dambudziko - Goroferi anozivikanwa pasi rese uye muridzi wemuhoro, muridzi, Tiger Woods, anogadzirira kuitisa iyo 2021 Gamba Renyika Dambudziko kuAlbany, The Bahamas kutanga Muvhuro, Mbudzi 29 - Zvita 5, 2021, kutsigira dzidziso yevechidiki kupasi rese.
State-of-the-Art Superyacht Shamwari Marina Inovhura muC Walker's Cay, Maodzanyemba Abacos - Varidzi Carl naGigi Allen vanogamuchira varedzi vegungwa kuguta guru reBahamas nekuvhurwa kwe Walker's Cay. Iyo marina ichangobva kukudziridzwa inogona kutora superyachts uye inoronga kuwedzera zvimwe zvinobatsira zvinosanganisira dziva, spa uye bungalows.
Tropic Ocean Airways Inotangisa Airlift Services kubva kuGreat Harbor Cay - Kutanga 2 Gunyana, Tropic Ocean Airways inowedzera sarudzo dzakarongwa dzekubhururuka kuGreat Harbor Cay muBerry Islands. VaFloridians vava kugona kunyorera masevhisi-akasununguka kubva kuFort Lauderdale kuenda kuNassau, Bimini uye The Berry Islands.
VaBahamas Vakasarudzirwa "Yakanakisa yeCasino Yakanakisa Kosino 2021" - Zvitsuwa zveBahamas zvakasarudzwa kune iyo Nyika Makasino Makomborero. Vafambi vanogona kukanda mavhoti avo emahara online ikozvino kusvika Gumiguru 15, 2021.
Kuti uwane yakazara rondedzero yezvibvumirano uye mapakeji eBahamas, shanya www.bahamas.com/deals-packages .
Bata Chinwiwa uye Gara Zvishoma paMargaritaville Beach Resort - Kana uchigara mazuva gumi nemana kana kupfuura pa Margaritaville Beach Resort, vashanyi vanogamuchira mitengo yakakosha kusvika pamakumi mana muzana kubva pamitero yenguva dzose. Rwendo rwekufamba ikozvino kusvika munaZvita 40, 31.
$ 150 Fee Kiredhiti yeOuts Island Vacationers - Vatyairi vega vega vanogashira madhora zana nemakumi mashanu emadhora echikwereti kweakagara-booked maviri-husiku hotera kugara chero pavanotora chikamu. Bahama Kunze Zvitsuwa Kukwidziridzwa kwenhengo yenhengo chivakwa pamberi paGumiguru 31, 2021.
Iine zvitsuwa zvinopfuura mazana manomwe uye cays uye 700 yakasarudzika chitsuwa nzvimbo, Iyo Bahamas iri makiromita makumi mashanu chete kubva kumahombekombe eFlorida, ichipa nyore kupukunyuka nzira inotakura vafambi kubva kune avo ezuva nezuva. Zvitsuwa zveBahamas zvine hunyanzvi hwepasi rose hwekuredza, kudhiraivha, kukwasva, kubhururuka, uye zviitiko zvakasikwa, zviuru zvemamaira emvura anoyevedza epasi uye mahombekombe akajeka akamirira mhuri, vakaroora uye vafambi. Ongorora zvese zviwi ndinofanira kupa pa www.bahamas.com kana uri Facebook, YouTube or Instagram kuti uone nei Zviri Nani muBahamas.